Caqabad soo wajahday Shirka Xalane lagu qabanaayo & Farmaajo oo isbedel ogolaaday? - Wardeeq 24 TV Caqabad soo wajahday Shirka Xalane lagu qabanaayo & Farmaajo oo isbedel ogolaaday? Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Caqabad soo wajahday Shirka Xalane lagu qabanaayo & Farmaajo oo isbedel ogolaaday?
Caqabad soo wajahday Shirka Xalane lagu qabanaayo & Farmaajo oo isbedel ogolaaday?
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Wardeeq News ayaa sheegaya in shirka la qorsheynayo inuu ka dhaco teendhada Afisyooni ee madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada uu wajahayo caqabad keeni karto inuu baaqdo ama dib u dhaco ugu yaraan.
Qoor Qoor iyo Lafta-gareen ayaan weli soo gaarin Muqdisho, halka Guudlaawe oo markii hore ku sugnaa uusan weli shirkan ka hadlin.Shirka teendhada Afisyooni ayaa waxaa dalbaday Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo sheeegay inaysan aamineyn Villa Somalia, waxaana haddii sida hadda la isku dayayo ay suurta-gasho, oo ay diidaan qaar ka mid madaxweyne goboleedyada kale ay mugdi weyn gelin doonta qabsoomiddiisa.
Previous article+ LEBANON: A STATE IN COLLAPSE
Next articleMa cadda sida xaal noqon doono, Farmajo Ayaa Ka Walacsan